कञ्चनपुरमै फेरी अर्की बालिकाको बलात्कारपछि हत्या ! - Experience Best News from Nepal
कञ्चनपुरमै फेरी अर्की बालिकाको बलात्कारपछि हत्या !
कृष्णपुर नगरपालिका–८ शान्तिपुरकी १७ वर्षीया किशोरी कविता विष्टको बलात्कारपछि भएको हत्यामा पनि प्रहरीले सुरुमा चासो नदिएको पाइएको छ । जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले चासो नदेखाएपछि पीडित परिवारले नै अभियुक्तलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाएको कविताको परिवारले बताएको छ ।
गरिबको पक्षमा प्रहरीले कहिल्यै काम गरेन,’ उनले भने । मदन र भरतले प्रहरीसँगको बयानमा कविताले आफ्नै जुत्ताको तुना जोडेर रूखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको र आफूहरू फसिने डरले रूखबाट शव झिकेर गाडेको बयान दिएका छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
फोहोर उठाउनका लागि विहानै टाेलटाेलमा पुग्छन् वार्ड अध्यक्ष !
निर्मलाकाे हत्यारा प्रहरीलाई भन्दा पत्रकारलाई बढी थाहा छ : महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल
पाकेट मारको रोचक तथ्य – चोरेको पैसाले विदेशी महिलासँग मस्ती !!
२०१९ को अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लैजादै जापान !